Entertainment khabar, Author at Entertainment Khabar - Page2of 446
चर्चित हास्यकलाकार जितु नेपालले भारतीय कलाकार कपिल शर्माका सामू आफुलाई गरिएको उपेक्षा जीबनमा कहिल्यै नभुल्ने बताएका छन् । केही वर्ष अगाडी नेपाल आजले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनेले भारतीय कलाकार र आफुहरुलाई गरिने विभेदका बारेमा भावपूर्ण अनुभव साटेका थिए । उनले भारतीय कलाकार कपिल शर्मा नेपाल आउँदा आफुलाई बोलाएर पनि आयोजकले नराम्रोसँग उपेक्षा गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । ...
काठमान्डाँै । नेपाली मौलिक लोक गीत संगीतको विकाशमा क्रियाशिल गायक अर्जुृन पन्त र गायिका सुनिता वुढा क्षेत्रीको मातृभुमी प्रति समर्पित गीत " पर्वत लिमीठाना " गीतको भिडियो अन्जना डिजिटल म्युजिक प्राली मार्फत बजारमा सार्वजनिक भएको छ । पर्वत जिल्लाको लिमीठानाको पर्यटकिय तथा सास्कृतिक मौलिक सभ्यतालाई गीतमा समेटिएको छ । गीतमा आफु जस्तो अवस्थामा भएपनी आफनो जन्मभुमीलाई सम्मान गर्नुपर्ने भाव गीत...
‘हेर यो मुटुमा’ चिरञ्जिवीको अभिनय, भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं। टिकटकबाटै हिट भएको गित ‘हेर यो मुटुमा चिरा पर्‍या छ’मा चिरन्जिवी सापकोटा र रोश्नी कार्कीले अभिनय गरेका छन्। बादल थापाको शब्द संगित र स्वर रेहेका गित यस अघि अडियो बजारमा आएको थियो। बजारमा अडियो आएपछि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अधिकांशको रोजाइमा परेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा रुचाइएकोले अडियोलाई न्याय दिन भिडियो पनि निर्माण गरेको चिरञ्जिवी सापकोटा बताउछन्। दुई अक्षरको मायाले मानिसको जीवनमा...
काठमाडौं र गायिका एलिना चौहान र गायक विवेक चौलागाईको स्वरमा रहेको “डल्ली” गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । डिएआर मुभिजको अफिसियल च्यानल बाट सार्वजनिक भएको “डल्ली” को शब्द, संगित, परिकल्पना तथा भिडियो निर्देशन प्रभावन जे को रहेको छ । कलाकार बिकास लामिछाने, एलिना चौहान, राजाराम गौतम र विपना चौलागाईको अभिनय रहेको भिडियोको ज्ञानेन्द्र शर्मा हुंमागाईले छाँयाकन, डिनशन शाहले सम्पादन र श्रृगार माहि ...
भनिन्छ, सपना देख्नेले मात्रै समाजमा ठूलो मानप्रतिष्ठा र पैसा कमाउन सक्छन । तर केही पात्रहरु यस्ता पनि छन्, जसले धेरै महत्वाकांक्षी सपना नदेखी सफल भएका छन् । मिहिनेतमा कमी नगर्नेहरु नै सफल भएका छन् । निरन्तरता, इमान्दारिता र लगनशीलता । यी तीन शब्दलाई सफलताको सूत्र भनिन्छ । यिनै तीन सूत्र जीवनमा लागू गरेर सफल भएका व्यक्ति हुन् अहिलेका स्थापित उद्योगी चन्द्र ढकाल । बागलुङ जिल्लाको सामान्य परिवा...
भाग्य मेरो पक्षमा छ ? , के उसले मलाई कल गर्ने छ ? , के म सफल हुनेछु ? हामीले कम्तीमा एकपटक आज के हुन्छ भनेर जान्न खोज्छौँ । राशी क्यालेन्डरको १२ चिन्हमा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीनको विशिष्ट प्रतिभा हुन्छ जसले व्यक्तिलाई परिभाषित गर्दछ । के तपाईं बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईंको लागि दिनको भण्डारमा के छ भनेर जान्न मन हुँदैन ? त्यसोभए ती नतीजाहरू आज त...
नायिका पूजा शर्मा र संचारकर्मी प्रकाश सुवेदीको विवादको बिषयमा अहिले चलचित्रकर्मीले पनि मुख खोल्न थालेका छन् । आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममा सुवेदीले ‘दारा भएका नायिकालाई हामीले महानायिका बनाइदिनुपर्ने’ भन्दै टिप्पणी गरेपछि यसको चर्को आलोचना भैरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक बिषयलाई लिएर राष्ट्रिय टेलिभिजनमा टिप्पणी गरिनु दुखद कुरा भएको भन्दै चलचित्रकर्मीहरुले दुखेसो र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छ...
मुम्बइ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युको अनुसन्धानका क्रममा ठूलो रकम घोटाला भएको खुलासा भइरहेको छ । प्रवर्तन निर्देशनालयले सुशान्तकी गर्लफ्रेण्ड रिया चक्रवर्तीसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा यस्तो खुलासा भएको हो । सुसान्तको खातामा रहेको १५ करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको अनुसन्धानका क्रममा अब सुशान्तका चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरु पनि तानिएका छन् । सोधपुछका क्रममा गत मार्चमा सकिएको आर्थिक वर्षमा कम्पन...